Date My Pet » Nei Uchifanira Hatifaniri kuedza Change Guy Your
kubudikidza Lisa Reynolds
Nei Uchifanira Hatifaniri kuedza Change Guy Your
Last updated: Dec. 02 2020 | 2 Maminitsi verenga
Pane kudaro zvakanyorwa zvakawanda nezvokuti ungaratidza sei kuchinja murume wako. Sei unogona kupingudza iye uye kuti iye kupinda murume munoda kuti ave. Asi ngationei kuva akatendeseka pano, zvakanyorwa nguva dzose hurukuro chipo uye zvinoita sokuti Gloss pamusoro refu migumisiro yezviito zvakadaro. Chokwadi ndechokuti imi chete uchida kushandura munhu nokuti haasi akakukodzera.
Kana mukangoda kana zvechokwadi akaita mukomana haudi kuchinja navo. Kunyange unovenga nezvake zvinhu iwe rumbidza pamusoro pake nokuti zvinhu kuti iye chaizvo ndiani. Mukuwedzera iri kwenguva refu vachava anopedzisira kutsamwa imi kana iwe kudzichinja. Uye unogona mhosva? Ungada mumwe munhu kuchinja imi majaya uye lasses? Deep pasi pasinei tiri hatidi hafu vanomoyo rudo. Rudo chete pakugadzirisa kuti mukomana asina kwatiri. Zvino vanhu vanowana pamusoro zvinoshamisa mhando ichi (Chokwadi kutadza asi ukama ose anahwo kuti nguva) rudo apo unogona kusununguka, fara, kuwana zivo kuti anokuda iwe vanoshinga. Havaedzi kuchinja nemukomana yokutanga vanosangana kupinda munhu haasi. Vanomirira uye vanoona kuti munhu anoshandura nyika yavo pasina vanoda kushandura pachavo.
Rudo pamusoro kuremekedza. Unofanira kuisa mukati zvaunotarisira kubuda. Saka kana usingadi iye kushandura iwe zvino zvinozoita unofanira kuva kuremekedza varege kumuchinja. Kunze kana uchinyatsoda kumuda pfungwa kuchinja chero chikamu pake hakuzopfuuri pfungwa dzako. Handisi kuti musingadi kuwana upenyu-refu shamwari nokushandisa mukukurira yose / kuchinja nzira asi hamuzondiwani rudo rwechokwadi kuti nzira. Naizvozvo chisarudzo anewe. Unoda mumwe munhu kana chimwe?
Ini Ona Munhu I Like – zvino chii?
Kwaungawana Rudo Rwechokwadi Online?
Sex Anogona Kukubatsira Urarame Upenyu Huri Nani sei
Uri kunonga Wrong Partners?